Imveliso yePlastiki yaseChina kunye neFactory | LangO
I-TKB Mold yimveliso yokubumba inaliti enoxanduva, ukubonelela ngeemveliso zeplastiki, kunye noshicilelo lwephedi, i-Silkscreen, ipeyinti yokutshiza, ukuwelda kwe-ultrasonic, i-Laser Etching ukuqinisekisa isisombululo esipheleleyo. Iindawo zethu zokuvelisa ziye zavunywa isiqinisekiso se-ISO 9001, njl. Ungasithemba ngokupheleleyo…
I-TKB Mold yimveliso yokubumba inaliti enoxanduva, ukubonelela ngeemveliso zeplastiki, kunye noshicilelo lwephedi, i-Silkscreen, ipeyinti yokutshiza, ukuwelda kwe-ultrasonic, i-Laser Etching ukuqinisekisa isisombululo esipheleleyo. Iindawo zethu zokuvelisa ziye zavunywa isiqinisekiso se-ISO 9001, njl. Unokuthembela ngokupheleleyo kwiindawo zethu zokuvelisa, iimveliso kunye nokubeka ii-odolo zakho.
Iithegi ezishushu: iimveliso zeplastiki, i-China, abavelisi, umzi-mveliso, ezenziwe e-China, AMalungu e-Auto Plastic Mould, i-Plasitiki yangaphambili kunye ne-Back Cover Mold, Ukubunjwa kwesitofu seTshaja yePlasitiki, imveliso yesitofu, Izixhobo zoNyango zePlastiki, aMalungu ePlastiki yemihla ngemihla
Ngaphambili: Izinto zePlastiki zeFactory yezixhobo
Okulandelayo: Isicoci seRobhothi